Icandelo le-Porn yenza imilingo emiluthayo Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho Icandelo lezonyango
Icandelo lezonyango liye laphindaphinda ihlabathi leentlobo zeebhiliyoni zeedola ngonyaka. Kunzima ukubeka uphawu olucacileyo kuyo njengokuba kungekho zifundo ezithembekileyo zakutshanje, kodwa yinkampani enkulu. Ininzi ye-intanethi ye-intanethi yenziwa kwiimeko ezingekho mthethweni. Ngokuqhelekileyo ibonisa imisebenzi enokuba yingozi kwimpilo. Umzekelo kukho ukusetyenziswa okubanzi "kokungabikho," oko kukuthi, isondo lesandulela ngaphandle kweikhondom. Intsholongwane kaGawulayo isona sisinye sezifo ezifa kakhulu emhlabeni, inombolo ye-2 kwinani lezifo ezithathelwanayo yi-World Health Organization. Kwi-2014 yabulala ngabantu abayi-1.4 yezigidi.
Uninzi lweentlobano zesini ezingcolileyo zibonisa ukulala ngokwesondo, ulwalamano kunye noxinzelelo. Ngokuqhelekileyo iqulethe iziganeko zokudlwengula kwangempela okanye ngokufanayo kwaye ngezinye izikhathi kubonisa ukutshata. Ezi ziqwenga ezithusayo zikhangele izinto ezibonakalayo kwingqondo. Imifanekiso eye yabonwayo ayinakubonakala. Izinto ezinjalo akunzima ukuzifumana. Kuxinzeleleke ngokukodwa kubantu abancinci abaye babika kwiindawo zokubuyiselwa ezi mifanekiso ezinokubangela ukuba kubekho ixesha elide, ama-flashbacks.
Ukuvuyisa kokubheka izinto ezihlaselayo kubangela ukuba i-dopamine ikhulise ukubenza bafune ukubuyela kwakhona. Oku kukhupha ubuchopho ngexesha elide kwaye kunokukhokelela ekudakaleni kwemizwelo. Uphando lubonisa ukuba ulutsha olubukela amanqanaba aphezulu kwi-intanethi ye-intanethi lunempendulo engaphantsi kwindlobongela yesitalato kwaye azimisele ukungenelela.
Umthetho osisiseko woqoqosho kukuba apho kukho imfuno, kuya kubakho ukubonelela. Ukutsaliswa kwe-intanethi ye-intanethi kuthetha ukuba umnqweno we-intanethi uya kuqhubeka ukwandisa. Njengokuba izilwanyana ezidakisayo zifuna ngaphezulu kwezinto ukuze zitshitshise, ngokunjalo izilonda zoononophala zifuna izinto ezintle, ubunzulu kunye nobuninzi bezinto eziphathekayo ukuze zilungiswe kwaye ziphephe ukungabikho kokuphazamiseka okubangelwa ukuhoxiswa kokuvuselela. Njengoko ukunyamezela kwelinye iqela lezinto eziphathekayo akusayi kuba nempembelelo, ukufunwa kwezinto ezininzi ezihlaselayo ziya kuqhubeka. Icandelo lezonyango livuyisa kakhulu ukulibonelela.
Khuphela i yokuzonwabisa malunga nendlela imboni yezobucayi isebenza ngayo.
<< Ukunyuka koLwaphulo-mthetho Ukwabelana ngesondo kwiWebcam >>